အပေါ်မယ့်အရာကို။ ကြၽန္ေပိုင်ရှင်မှာအကောင်းဆုံးအခမဲ့အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းများနှင့်အကြွင်းမဲ့အာဏာနှစ်သက်နိုင်စေဖို့တင်ဆက်ဖို့သင်၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သောနေရာမှာအသင်းကိုအပေါ်နောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်။ ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးစတင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သို့စွဒီမျဉ်းကြောင်းအရာ၏နောက်ကျောအတွက်သြဂုတ်လ ၂၀၁၅:ဒါဟာအချိန်အကြာလာမယ့်၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာကကျွန်မတို့ဟာအခုဆိုရင်အကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းအတွက်စီးပွားနေသောလူများအတွက်အမှန်တကယ်ရှာဖွေနေသည့် XXX ဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံ။, ထိုသို့မဖြစ်ခဲ့ပြီတစ်ဦးလွယ်ကူသောလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းလျှောက်ဖို့ကိုဆင်း၊ဒါပေမယ့်ဎငါေကျွန်မတို့ဟာအဲဒီမှာ၊အချိန်ရဲ့ကမ္ဘာကိုပြနေတာလုပ်နေနိုင်စွမ်း! အခြေအခြားနေရာများသင်ပူဇော်သောအခါသူတို့မကယ်မလွှတ်:ကျနော်တို့အတွက်ပေးတာပေါ့တစ်ဦးကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံ၏အကြိုက်ရာမဲ! အကောင်းဆုံးအခမဲ့အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းများအတွက်အရှည်ခြောက်နှင့်မဆင်းသွားဘဲတစ်တိုက်ပွဲအထိပြပွဲလူတိုင်းအဘယ်သို့သဘောအသိုင်းအကြောင်းအရာအာရုံစူးစိုက်နေခဲ့တယ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်သို့လွှဲပြီ။, နေတယ်ဆိုရင်ပန်းပုံစံများကိုမြင်ကနေဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းမှကြွလာသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးအစား၊သို့ဖြစ်လျှင်ဤဖြစ်ရတယ်တစ်ခုတည်းသောအကောင်းဆုံးနေရာအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်။ ရဲ့တစ်ဦးကြည့်ကြရပတ်ပတ်လည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကရရှိပါသည်နှင့်သင်မကြာမီနားလည်သဘောပေါက်ကြောင်းဒီထက်ပိုကောင်းကြွင်းသောအရာ!
စရာမရှိပါအဖြစ်လာသင့်အံ့သြဖို့မည်သူမဆိုကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးအစားအားဖြင့်သီလ၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ပေးပစ်အားလုံး၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့မီဒီယာဘဲမေးရန်အဘို့အသင်ပိုက်ဆံပြန်လာအတွက်။ ဤအမှုကိုပြုသောအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအကြောင်းသူတို့အားလိုငွေရှေ့တန်းတက်နိုင်ရန်အတွက်ကောင်းတစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသွား။, ကျွန်တော်တို့သောက်သုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာကနေအခမဲ့ကစားရန်ပင်ဂိမ်းကြောင်းပြပြီအချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်သင်တို့ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်အမြတ်အစွန်းအကျိုးတူ–ပင်လျှင်သင်ပြုပေး၏ထုတ်ကုန်အကွာများအတွက်အခမဲ့ခွင့်ပြုခြင်းအားဖြင့်လူတွေကိုအထောက်အကူဆန္ဒအလျောက်နှင့်ဝယ်သေးငယ်တဲ့အမှုအရာဖြစ်စေကြောင်းအဆိုပါဂိမ်းကိုအနည်းငယ်ပိုပျော်စရာ။ အခုဒီပိုနှိုးဆော်သံခေါင်းလောင်းထိုးလက်စွပ်ဘို့ကျနော်တို့လုံးဝအသိစိတ်မပူပါနဲ့၊အကောင်းဆုံးအခမဲ့အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းအခမဲ့ကစားရန်အကျိုး! ဤတစ်ဖြစ်ပါသည် ၁၀၀%အခမဲ့ကစားရန်အိမ်သင်အရာအားလုံးခံစားနိုငျနှင့်ပေးဆောင်ဖို့မလိုအပ်များအတွက်ခွင့်ထူး။, အဲဒီလမ်းဒီတော့ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်ဖိအားများအောက်မှအတူတကွသွင်းထားကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းစစ်ခင်းကျင်း၏။ မြင်၊လျှင်မတကယ်ကယ်နှုတ်တစ်ခုခုသင်စဉ်းစားသည်ထိပ်တန်းအရည်အသွေး၊သင်မလှည့်ပတ်ကပ်! ဤသည်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စပိုကောင်းကြွင်းသောအရာတို့ထက်:ကျွန်မတို့ဟာကျယ်ကျယ်လှုံ့ဆော်အားဖြင့်ငွေကြေးနှင့်လိုအပ်သက်သေပြဖို့သင်ဖူးသေးတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံ။
အကျင့်ကိုကျင့်သောအခါသုတေသနများယှဉ်ပြိုင်မှုအပေါ်၊ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ကြောင်းရှိကြီးမားတဲ့ပြဿနာကြောင်းပလက်ဖောင်းမများလည်းအများအပြားဂိမ်းများအတွက်မိတ်ဆွေမှကစားပါ။ နေစဉ်မွာလည္းပေးခြင်းကအားလုံးကိုပယ်ရှား–ထိုသို့မဆိုလိုပါဘူးသူတို့အမှန်တကယ်ချပြီးထွက်ရှိမာဏ။ ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ဤအခြေအနေ၊ကျနော်တို့အတွက်ဒါဟာတာအကောင်းဆုံးအသွားအမျိုးမျိုးများအတွက်ခေါင်းစဉ်နှင့်တဖန်:အထိနံပါတ်များအဖြစ်ခက်ခဲဖြစ်တယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်အမေရိကန်ကတည်းက၊ကျနော်တို့မသိဒါကြောင့်လူအတော်များများကွဲပြားခြားနားသောအရသာနဲ့ဦးစားပေးရန်ကြွလာသောအခါအရွယ်ရောက်ဖျြော။, စိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေသမျှကိုသင်၏မေတ္တာသည်ဤအမျိုးအစား၊ကျွန်မတို့ဟာသွားနိုင်မှပေးကြောင့်သင်ပြီးတော့အချို့! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိကဝတ်ကြောင်းအကောင်းဆုံးအခမဲ့အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းသည်ကမ္ဘာ၏အခြားသောအရပ်တို့ထွက်ရှိပြီးဟုတ်:ကျွန်တော်ဆက်လက်ဖန်တီးဖို့တစ်လျောက်ပတ်သောအရေအတွက်ဂိမ်းအတွက်လဲလှယ်အတွက်သင်တို့အဘို့အကပ်။ အစိတ်အပိုင်းစေသည်ဘယ်အရာ၏ပြီးကျန်ကနေမတူညီတဲ့အကြောင်းကျွန်မတို့ ၄၀+ထုတ်လုပ်ပြီးအခုအချိန်မှာသင်တို့အဘို့ကစားရန်၊ထို့အပြင်အတွက်၊ကျွန်တော်တစ်ဦးထည့်သွင်းရန်တာပေါ့နောက်ထပ် ၆ ဂိမ်းဖြစ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတစ်နိမ့်ဆုံး။ တော်တော်အေးမြ၊အယ်?, ကိုယ့်တဦးတည်းအယူအဆင့်များနေတာပါကြောင်းသေချာစေရန်အကောင်းဆုံးသင့်ရဲ့ခေါသည်ပေါက်ကွဲ! အကောင်းဆုံးအခမဲ့အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းအစဉ်အမြဲကြိုးပမ်းအားပေးနှင့်အတူရေအဖြစ်အရည်အသွေး၊ဒါပေမယ့်အဟောင်းအဖြစ်ကောင်းပိုပြီးအရေး၏အနှစ်၊သီလအားဖြင့်သောအချက်ကိုကျွန်တော်တို့သင်ဂိမ်းအဖြစ်ကြာမြင့်စွာဖြစ်နိုင်!
ရှိပါတယ်အများအပြားအံ့သြဖွယ်အမှုအရာအတွက်ပိုက်လိုင်းကဒီမှာမှာအကောင်းဆုံးအခမဲ့အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ္း:တွေလုပ်မယ့်ကျွန်တော်တို့အမှန်ရောက်၏ရွေးချယ်မှုအတွက်ကြောဂိမ်းကစားကြောင်းသိ။။။။။ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာကသင်ချစ်ကြလိမ့်မယ်အတိုင်းစီမံလုပ်ကိုင်ခဲ့တာနှင့်အမျှစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအကြောင်းသင်တို့၏စွမ်းရည်ကိုအမှန်တကယ်ပျော်မွေ့သောချမ်းသာနဲ့ဆက်စပ်အားလုံး၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်။ မေ့လျော့၊သင့်ရဲ့အချိန်ကိုဖြုန်းနှင့်အတူအရပ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသူအနာဂတ်:အထူးသဖြင့်အခါသင်စဉ်းစားအဘယျသို့ကအကောင်းဆုံးအခမဲ့အွန်လိုင်းညမ်းသွားများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်မှ!, ဥပမာအားဖြင့်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖက်ဆာဗာနီးပါးကိုအွန်လိုင်း၊ဒါကြောင့်သင်ချက်တင်နှင့်အတူအခြားသွေးကြောဂိမ်းကစားကခေါင်းစဉ်၊ဤအပြင်၌၊သင်တို့သည်လည်းရှေ့ဆက်သွားနှင့်အခမဲ့ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြွန်! မှန်တယ်:XXX ကလစ်ထက်ဝေးပိုကောင်းဘာမှမသင်ဖြတ်ပြီးလာပါတယ်အခမဲ့အဘို့အဘယ်နေရာမှာမဆိုလိမ့်မယ်ကျေးဇူးသင့်ရဲ့စောင့်ကြည့်။ ငါလုံးဝအစွဲစိတ်ကူးပေးခြင်း၏ထွက်ရှိပါတယ်လူတိုင်းလက်လှမ်းမီအားလုံး၏အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းသင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းအကောင်းဆုံးယိုကိုကူညီ!
ကောင်းပြီမိတ်ဆွေတို့ရေ:အဖြစ်အများကြီးငါပြောနေတာကိုချစ်၊ကျွန်မအထင်ဒါဟာဖြစ်နိုင်အချိန်သင်တို့အဘို့အရှေ့ဆက်သွားနှင့်ထွက်စစ်ဆေးအကောင်းဆုံးအခမဲ့အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းများ။ ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အများအပြားအေးမြဂိမ်းအတွင်းအပြင်နှင့်သူတို့အခမဲ့သင်တို့အဘို့အထွက်ကြိုးစားဖို့၊ဒါမဟုတ်အဘယ်ကြောင့်အတိအကျကိုပြုမည်? မေ့စည်ပတ်လည်ချုံနှင့်အတူခွဲတန်းတူဖစ္မ်ားေ:ရုံရှေ့ဆက်သွားနှင့်ယူ၏အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုလာမည့်အဆင့်အထိ။ ကျနော်တို့ဘယ်တော့မှငြီးငွေ့၏အကောင်းဆုံးဝေမျှ XXX ဂိမ်းများနှင့်မပျင်းရကစား၏။ စာဖတ်ခြင်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ်တက်ငါ့အတြက္ငါမြော်လင့်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်အများကြီးပျော်စရာနေရာအဖြစ်ငါအတူတူကအားလုံးကိုချ။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ချစ်ခြင်း!